၂၈။” ဟူရ် “ကညာပျိုဆိုတော့? | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← ၃၀။အလ္လာဟ်က ကာဖရ်တို့၏ နှလုံးသားကို တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
အလ္လာဟ်သာလျှင် မိခင်ရဲ့ သားအိမ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ လိင် ကို သိတာ ဖြစ်ပါသလား? →
၂၈။” ဟူရ် “ကညာပျိုဆိုတော့?
အမေး။ ။ကုရ်အာန်အရ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဂျန္န သုခဘုံကို ရောက်ချိန်မှာ သူ့အတွက် “ဟူရ်”ဆိုတဲ့ လှပတဲ့ကညာပျိုတွေကို ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက် ဂျန္နသုခဘုံကို ဝင်ရရင်တော့ ဘာရစရာရှိပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ (၁) ကုရ်အာန်ထဲမှာ “ဟူရ်” ဟုဖော်ပြထားချက်။
ဟူရ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကုရ်အာန်ထဲမှာ လေးနေရာထက်မနည်း မှာတွေ့ကြရပါတယ်။
(၁) စူရာဟ် ဒုခါန်၊ ကဏ္ဍ(၄၄) ပါဒ (၅၄) မှာ……………..
“ထိုမှတစ်ပါး ငါအရှင်သည် ၎င်းတို့အား ဖြူ၍ လှပပြီး ရွှန်းလဲ့သော မျက်စိပြူးသော အဖော်အပေါင်းတို့ နှင့် ဆက်ပေးချေအံ့။”
(၂) စူရာဟ် အလ် တူရ်၊ကဏ္ဍ (၅၂) ပါဒ (၂၀)ထဲမှာ…………
“ထိုမှတစ်ပါး ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အား လှပ ပြူးကျယ် စွဲမက်ဖွယ် မျက်လုံးရှင် အဖော်တို့ရှိအံ့။”(အလ် ကုရ်အာန်-52:20)
(၃) စူရာဟ် ရဟ်မာန်၊ကဏ္ဍ(၅၅) ပါဒ (၇၂)ထဲမှာ………….
“တင့်တယ်ဘိသော မဏ္ဍာပ်တွင်းဝယ်(ယင်းတို့၏ အကြည့်ကို) ချုပ်တီးထားသော အဖော်များ”(အလ် ကုရ်အာန်-55:72)
(၄) စူရာဟ် ဝါကိအဟ်၊ကဏ္ဍ (၅၆) ပါဒ (၂၂) ထဲမှာ………….
“လှပပြူးကျယ်ပြီး ရွှန်းလက်သော မျက်လုံးရှင်တို့နှင့် အဖော်ပြုရအံ့”(အလ် ကုရ်အာန်-56:22)
(၂) ဟူရ် ကိုလှပသော ပျိုကညာများအဖြစ် ဘာသာပြန်ခဲ့ကြသည်။
ကုရ်အာန်ကို ဘာသာပြန်သူ အတော်များများကပဲ “ဟူရ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အထူးသဖြင့် အူရဒူဘာသာပြန်တွေမှာ “လှပတဲ့ပျိုက
ညာများ” “မိန်းကလေးများ” ဆိုပြီး ဘာသာပြန်တတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ ယောကျာ်းတွေအတွက်ပဲလို့ သူတို့တွေကို ဆိုလိုရာ ရောက်သွား
ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိန်းမသားများတွေကရော ဂျန္န္နသ်သုခဘုံကို ဝင်ရောက်ရရင် သူတို့ကရော ဘာရကြမှာလဲ။
(၃) ဟူရ်၏ အဓိပ္ပါယ်။
တကယ်တော့ “ဟူရ်” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက အဟ်ဝရ် (ယောက်ျား များအတွက် သက်ဆိုင် သော) ရဲ့ ဗဟုဝုစ်ကိန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲ ဟောင်ရာ (မိန်းမသားများအတွက် သက်ဆိုင်သော) ရဲ့ ဗဟုဝုစ်ကိန်းလဲပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ ဝိညာဉ်အဖို့ အထူးသီးသန့်ချီးမြှင့်တော်မူမဲ့ သီးသန့် အရည်အသွေးဖြစ်တဲ့ ဟောင်အရ် (Hauar)ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရည်ရှိနေတဲ့ မျက်လုံးများပိုင်ရှင်-ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖော်ညွန်းတာ
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန္နသ်က ယောကျာ်း သို့မဟုတ် မိန်းမတို့ကို ညွန်းထားတာပါ။ဒါက နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ္တုရဲ့ အဖြူသားထဲက အဖြူတကာ့ အဖြူဆုံးအပိုင်းကို ဆိုလိုထားတာပါ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ တခြားပါဒတော်တော်များများမှာပဲ ဂျန္နသ်သုခဘုံမှာ အသင်တို့မှာ အဇဝါဂ်ျတွေရှိနေမယ်။ဒါက စုံတွဲ သို့မဟုတ် အဖော်အပေါင်း သို့မဟုတ် ကြင်ဖက်ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှစင်ကြယ်မြင့်မြတ် မှုရှိနေမယ်တဲ့။ မုသွဟရသွန် ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က စင်ကြယ်သောမြင့်မြတ်သောလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
“ယုံကြည်ပြီး ကောင်းရာကို ပြုကျင့်သူတို့ကို သတင်းကောင်းပေးလော့။သူတို့အဖို့ ဥယျာဉ်များ ရှိ၏။ယင်းတို့အောက်၌ မြစ်များစီးဆင်းနေ၏။သစ်သီးဝလံ တို့ကို ကျွေးမွေးလာသည့်အခါတိုင်း သူတို့က ဘာကြောင့် ယခင်က စားဖူးသည်တို့ကို ကျွေးရပ” ဟုဆိုကြအံ့။သူတို့ကို ဆင်တူရာရာကို ပေးလာခဲ့၍တည်း။ယင်းတွင် သန့်စင်သော အဖော်များလည်း ရှိအံ့။ထာဝရလည်း နေကြရအံ့။”
(အလ် ကုရ်အာန်- 2:25)
“ယုံကြည်ပြီး ကောင်းရာမွန်ရာကို ပြုကျင့်သူတို့အဖို့ရာကား ငါအရှင်က မကြာမြင့်မီ မှာပင် ဥယျာဉ်များ နှင့် ယင်းအောက်၌ မြစ်ရေအလျဉ် စီးဖြာနေသော ၎င်းတို့၏ ထာဝရဂေဟာဝယ် ခံစားစေအံ့။ယင်းတွင် သူတို့အဖို့ရာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီး မြင့်မြတ်သော အပေါင်းအဖော်များရှိအံ့။အေးမြလှသော အရိပ်အာဝါသနှင့် အမြဲ ထူးထူးကဲကဲ ရှိနေအံ့။”(အလ် ကုရ်အာန်-4:57)
ထို့ကြောင့် “ဟူရ်” ဟူသော ဝေါဟာရမှာ မည်သို့သော သီးခြား လိင်ပုဒ်ကိုမှာ ခွဲခြားဆိုထားခြင်း မရှိပါ။မုဟမ္မဒ် အဆဒ်က “ဟူရ်”ဟူသော ဝေါဟာရကို ကြင်ဖက် (Spouse)လို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး အဗ်ဒုလ္လာဟ် ယူစုဖ်အလီကကျတော့ အဖော်အပေါင်း (Companion)လို့ ဘာသာပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် တချို့သော အာလင်မ် ပညာရှိကြီးတွေက ဂျန္န္နသ်မှာ ယောက်ျားအတွက် ရမဲ့ ဟူရ်ဆိုတာက လှပပြီး ပြူး ကျယ်ရွှန်းလဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးရှင် ပျိုကညာ ဖြစ်ရမယ်။မိန်းမသားကကျတော့ လှပပြူး ကျယ်ပြီး ရွှန်းလဲ့လဲ့မျက်လုံးရှင် လုလင်ပျိုကို ၇ရမယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတာလဲရှိပါတယ်။
(၄) မိန်းမသားများက ဂျန္နသ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာသော ထူးထူးခြားခြား ရှိရာကို ရအံ့။
များစွာသော အာလင်မ်ပညာရှိကြီးတွေကတော့ စာသားအနေအထားအရ ကုရ်အာန် ထဲမှာ ဟူရ် ရယ်လို့ သုံးထားတဲ့ ဝေါဟာရကယောက်ျားများကိုသာ ကွက်ပြီးဆိုထား တာကြောင့် ပျိုကညာများသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြတယ်။ဟဒီးဆ်တော်ထဲမှာ တွေ့ရှိကြရတဲ့အဖြေကတော့ လူအားလုံးက လက်ခံနိုင်မယ့် အဖြေလို့ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားကတော့ ဂျန္နသ်မှာ လှပတဲ့ပျိုကညာ ဟူရ်ကို ရမယ်ဆို
ရင် မိန်းမကကျတော့ ဘာရမှာလဲလို့ ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းကို မေးလာခဲ့ရာမှာ အခုလို ဖြေကြားသွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။မိန်းမသားအတွက်က နှလုံးသားက တစ်ခါမှ မတောင့်တဖူးတဲ့ နားကလဲ ကြားမှ မကြားဖူးတဲ့ မျက်စိကလဲ မြင်ကို မမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာရာ ထူးကို ထူးခြားလှရာကို ဂျန္နသ်မှာ မိန်းမသားတွေကလဲ ရကြမှာပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဇကိးရ်နိုက်ခ်ရဲ့ စာအုပ်ကို (ဝါးခယ်မ မောင်မင်းနိုင် ဘာသာပြန်သော) (စောဒကနှင့် အဖြေ ၂)